ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရထားပေါ်မှာ… ကျူတန်းထဲမှာ…. လောကကြီးမှာ”
By reading your post,
I would like to highlight to you that you'll never end to write to say in your whole life all kinds of bad things come out from others people ..
So try to appreciate others people do great and good things and be productive in your life..if possible.
It'll be valuable..
I would like to repeat your comment to some of the commenters in this blog who have very myopic views as well as the ma-yaung-yar-si-luu commenters.
Mind you Guys! ( You know whom I am talking to..)
"I would like to highlight to you that you'll never end to write to say in your whole life all kinds of bad things come out from others people ..
It'll be valuable.."
We can try to appreciate others' great things. But it doen't mean that we need to ignore the bad things/the wrong doings/the injustics in our life.
You can choose to be silent but there are people out there who want to speak out/point out what they think (regardless of right or wrong). That is nothing wrong too.
Do they really follow Daw Su's idea which is she ignored other's bad things. Do they really love her ? I mean the blogger and friends.They are too much to abuse other.
Daw Aung San Suu Kyi's way is to tell the truth and to be frank all the time, not to keep silent in the face of injustice. She also criticises the wrong doing of others. Please study more about her.
ကိုပေါဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီ: ကို့ကိုယ်ကို ဘာလိုလုပ်လဲလို့ ပြန်မေးကြည့်မိတယ် သတ်မှတ်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်မိရင် ဗိုက်ကြီးသယ် ခလေးမအေ သက်ကြီးရွယ်အို ဘယ်သူလာလာ ထပေးပါတယ်၊ ကိုယ်ကတခြားထိုင်ခုံမှာ ၊သတ်မှတ်ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့သူက ထမပေးလဲ ကိုယ်ပဲထပေးလိုက်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်က ခုံမရှိလို့ရပ်နေရရင်တော့ သတ်မှတ်ထိုင်ခုံမာထိုင်နေတဲ့သူကို ထမပေးဘူးလားလို့ သွားမပြောပါဘူး၊ မသိဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်၊ Q ဖြတ်တာကတော့ ကိုယ့်ရှေ့ကဖြတ်တာလား နောက်ကဖြတ်တာလားပေါ် မူတည်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ရှေ့ကဖြတ်ရင် ထအော်ပါမယ် နောက်ကဖြတ်ရင် မသိဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါမယ်၊ စပီကာကော်နာ မသွားတဲ့ အတွက် ကို့ကိုယ်ကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရပါတယ၊် သွားတဲ့လူတွေကိုလဲ လေးစားအားကျပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လူများတုန်း မသိဟန်ဆောင်နေပြီ:
လူနဲသွားမှ လက်ကုပ်ပြီ: IC တောင်းလေ့ရှိတဲ အစိုးရမို့၊ ရှေ့မှာလဲ ကိုယ်ထက်မြင့်တဲ့ uni, poly graduated တွေတောင် ထိတာမို့၊ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေနဲ ကြေွးရှင်တွေရဲ့ မျက်နာတွေကို မြင်ယောင်မိတာမို့ မလာဖြစ်လိုက်ပါဘူး၊ အဲဒီအတွက် ဆောတီးပါဗျာ
ကိုမျိုးချစ်စီဘောက်က သဘောကျလို့ ကူးလာပြတာပါ..
3rd Jun 2009, 11:40 AM
မီးငယ်: ရှေ့တွင်ဟုတ်ကဲ့ နောက်တွင် မကျေနပ်။သို့သော် ဘာများတက်နိုင်ဦးမည်နည်း။
မီးငယ်: ကြံ့ဖွံ့တွင်သာ အင်အားရှိသည်မထင်နှင့် အရပ်ဘက် အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန များသို့လဲ တပ်မတော်က လူမဟုတ်သူများ လူအသွင်ပြောင်းကာ အတော်များများရောက်ရှိနေကြပေပြီ။ မနေ့က ညီငယ်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ကပြောသည်။ တပ်မတော်မှ လူများဌာနတွင် သောင်းကျန်းသည်။ မိန်းမသားများအား မျတ်နှာသာပေးသည်။ ယောက်ျားသားများအား အော်ဟစ်ဆဲဆိုသည် တပ်ထဲကအတိုင်းဆို တန်းစီပါးရိုက်ပစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းကို မခံနိုင်သော ၀န်ထမ်းများလည်း ရေ
3rd Jun 2009, 11:37 AM
မီးငယ်: ကဲ မည်သို့ ရှေ့ဆက်မည်နည်း။
3rd Jun 2009, 11:36 AM
မီးငယ်: ပြည်သူများကလဲ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ခါးသီးသောဒုက္ခဟု၎င်း ပေးဆပ်ရဲသော သတ္တိရှင် ဖိအားပေးမှုကို တောင့်ခံနိုင်သောအာဂ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အဖြစ်လေးစား ယုံကလွဲပြီး ထိုထက်မပိုတော့ချေ။
3rd Jun 2009, 11:35 AM
မီးငယ်: အကျဉ်းကျ ခေါင်းဆောင် လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် NLD သည်လည်း တစ်ယောက်သော သူအတွက် သာဦးတည်နေသည်ဟု ပြည်သူလူပြိန်း ကျွန်ုပ် တစ်စစသိလာ၏။ ယင်းကား မြန်မာ့အရေး မဟုတ်ဟု ထင်သည်။
3rd Jun 2009, 11:33 AM
မီးငယ်: ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ်သည်လည်း ဒီပဲယင်းအကြောင်းကို ရေနူးခြင်းဖြင့် အဝေးမှ လေယာဉ်ပျံအား ဂဲနဲ့ထုခြင်းဖြင့် တပ်မတော်ကြီးလဲ ပြိုကွဲနေပါပြီ။ အစ်ကိုကြီး ကိုရွှေမန်းသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာမျိုး ရေးကာ မဲဆွယ်ခြင်းသည်လည်းအတော် ထိရောက်၏ (ဘာမှကို ကိုကိုရွှေမန်းက မတုန့်ပြန်ပေ)
3rd Jun 2009, 11:31 AM
မီးငယ်: နအဖ ပြိုင်ဘက်များ၏ စည်းရုံးရေး စွမ်းရည်နှင့် ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများ ကို ကျွန်ုပ် လူပြိန်းတစ်ယောက် အတော်အားရမိ၏။
3rd Jun 2009, 11:29 AM
မီးငယ်: CRPP NCGUB ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ သည်လည်း ဘယ်အတွက် ကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးမှ နေ၍ မြန်မာလူထုအား စည်းရုံးမှု အတော်များများလုပ်ခဲ့ကြလို့ သူတို့ အဖွဲ့အစည်း နာမည်တွေကိုလဲ ပြည်သူတွေက တော်တော်ရင်းနှီးနေကြ၏(သိကိုမသိတာ)
3rd Jun 2009, 11:27 AM
မီးငယ်: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မပါလျှင်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အထမမြောက်ဟု ဆိုသည်ကို ၀မ်းမြှောက်ဝမ်းသာ ထောက်ခံချင်ပါသော်လည်းပဲ လက်ရှိ စာရွက်ပေါ်တွင် ရှိသော ဘက်တော်သားစာရင်း ထောက်ခံမှု စာရင်းအားနှိုင်းယှဉ်ပါက NLD သည် အတော်မှေးမှိန်နေ၏။ ဟုတ်ပါသလော။
3rd Jun 2009, 11:25 AM
မီးငယ်:ှုထိုအချက်ကို ဦးဝင်းတင် မစဉ်းစားမိလေသလော
3rd Jun 2009, 11:23 AM
မီးငယ်: ယင်းအင်အားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်အားအများဆုံး စာရွက်ပေါ်မှ စာရင်းများပေတည်း။
3rd Jun 2009, 11:22 AM
peacock: ကောင်လေး.. ချစ်သူလေး ဘယ်မတုန်းဟဲ့။
မီးငယ်: အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အတန်းတိုင်း၏ register (ကျောင်းခေါ်ကြိမ် စာအုပ်)နှင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး ဒဲ့ကူးယူခြင်း ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။
3rd Jun 2009, 11:21 AM
မီးငယ်:ူုူအသင်းဝင် အမှတ်ရှိသည်။
မီးငယ်: မဟုတ်ဘူးလို့ မငြင်းပါနှင့် မြို့နယ်တိုင်းရှိ ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် သင့်အမည်စာရင်းရှိသည်....
3rd Jun 2009, 11:20 AM
မီးငယ်: အဲ့ဒီခေတ်ကာလက မြန်မာပြည်တွင်းကျောင်းတက်သော သူများသည် ခန့်မှန်းခြေ ၁၉၉၆ ခုနှစ် ၀န်းကျင် ကျောင်းသားအားလုံး သည် အသင်းဝင်ဖြစ်သွားပေသည်။ အားလုံးသည် အသင်းသားစာရင်းဝင်၏
မီးငယ်လို ဘာများတတ်နိုင်မှာလည်းလို့မေးမယ့် လူတွေကို အကြံပေးကြည့်မယ်နော်။ ရှေ့တွင်ဟုတ်ကဲ့ နောက်တွင်မကျေနပ် မလုပ်ချင်ရင် ရှေ့တွင်မကျေနပ် နောက်တွင်ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ကြည့်ပါလား။ ဒါမှ မဟုတ် ရှေ့ရောနောက်ပါ ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါမှမဟုတ်သေးရင် ရှေ့ရောနောက်ပါ မကျေနပ်တာပေါ့။ အဲဒါတွေအားလုံး မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရှေ့ရောနောက်ပါ ဘာမှမလုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ Contributing by not contributing ပေါ့ဗျာ။ Good contribution လား၊ bad contribution ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပေါ့။ မစဉ်းစားတတ်လည်း ရပါတယ်။ မစဉ်းစားချင်လည်း အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ မြန်မာဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နအဖ ကတော့ ဘယ်လိုပဲ စည်းလုံးစည်းလုံး.... စည်းလုံးတယ်... အကွက်ကျတယ်.. ထောင့်စိတယ်.... ချီးကျူးတယ်..
>>>>နအဖ ကတော့ ဘယ်လိုပဲ စည်းလုံးစည်းလုံး.... စည်းလုံးတယ်...<<<<<
ဒါပေါ့လေ…. ဆောင်ပုဒ်ကိုက “ဘယ်သူခွဲခွဲ တို့မကွဲ၊ အမြဲစည်းလုံးမည်” ပါ ဆိုနေမှ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ “Whoever break break we are not broken, always united” တဲ့… ဟီဟီ။
အကွက်ကျတယ်.. = မြေကွက်တွေ ရိုက်ပြီး အမျိုးတွေနှင့် နောက်တော်ပါတွေကို ချပေးသည်။
ထောင့်စိတယ်.... = ထောင့်ထဲမှာ ဆွဲအစိခံရသည်။
ချီးကျူးတယ်.. … = ချီးစားကျူးသည်။
ကိုရဲဟန် လိုလူမျိုးကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော် အရှေ့မှာ ရေးခဲ့တဲ့ကွန်မန့်ကို ပြန်ကောက်ရရင် ကိုရဲဟန်ဟာ ပွင့်လင်း ရိုးသားမှု ရှိပြီး ကိုယ့်ကိုပိတ်ထား ကာရံထားတဲ့ တံတိုင်းအမှန်ကို သိသူမျိုးပါ။ ဒီလို လူမျိုးဟာ တချိန်ချိန်မှာ ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ လူမျိုးမို့ ဘေးထိုင်ဘုပြောနေသူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆင်ခြေပေးလှည့်စားနေသူတွေ ထက် အဆတရာလောက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ဖုယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆုတောင်းရုံနဲ့ ဘာဖြစ်မှာလည်းလို့သာ ပြောပြီး ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံမပြုတတ်သော ဘာမှလုပ်ချင်ပုံမရတဲ့ ဘာမှန်းမသိရသော အမည်မသိကြီးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
So you want advice..
Ever heard of ABSDF..
Vigorous Burmese Student Warriors (VBSW) ..
please stop alot of talks & for shows and
Start do some action ...
1st time in your life..
if you wanna talk about Fear..
so still continue planning praying with beautiful candles...romantically.?
sometimes..im sick of those comments wars!! for what?? in some post, the author is giving some msg but comments r not relevant! i accept different opinions but it seems that some guys r replying aggressively to those who have different opinions! Phew,,,
ဟုတ်ပါဗျား။ အပေါ်က Anonymous နဲ့ ထပ်တူပါပဲ။ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်လည်း ဘလိုင်းကြီးကို ဆွဲယူပြီး ဆဲတော့တာပဲ။
ကိုပေါရေ၊ အဲလို Comment ရေးသူတွေ အတွက် blank ပိုစ့် တစ်ခုလောက် လုပ်ပေးလိုက်ပါလား။ သူတို့စိတ်ကြိုက်တိုက်ခိုက်လို့ရအောင် ကျန်တဲ့စာဖတ်သူတွေလည်း အနှောင့်အယှက် မဖြစ်အောင်ပေါ့။
ကိုပေါရေ၊ တော်ပါပြီဗျာ။ လုပ်မနေပါနဲ့တော့။ ဒီလူတွေ ဒီလောက်သိတတ်ရင် အစထဲက ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ :(
When I got S'pore, I noticed that these seats were labelled like "Please give up this seat to those who need it more than you do". Then, it changed about2years ago like "Be considerate. Give up this seat to those who need it (by removing Please word)". Then, the lastest, "Reserved seats with only signs and arrow down to the seat". That is what I learnt about Eolution of A Seat in S'pore's MRT. :-) Waiting for changing lable for those "Reserved Seats" with Fine (like S'pore style).
Anonymous (June 3, 2009 8:47 PM) .... Thanks for sharing with us about the evolution ofatrain seat in Singapore.
It reaches the stage of "Reserved seat" written on the back of the seat. The next step will certainly be "Fine". That is why Singapore is calledaFine city. :-)
အဲဒီနာမည်တွေကို မကြားဘူးပဲနေမလားဗျာ။ ကြားဘူးတာပေါ့။ ကဲပါ ကျနော်ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျပြောစမ်းပါ။ ဖုယောင်းတိုင်မထွန်းပဲ ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ပါ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို လုပ်ရင် ဘယ်လိုမျိုး ထိရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရနိုင်တယ် ဆိုတာပါထည့်ပြောနော်။ ကျနော် စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်။
(အရင် post က comment ကို ဒီမှာ လာရေးရတာ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်လည်း သူက ဒီမှာလာရေးထားတော့ ဒီမှာပြန်ဖြေရတာပေါ့။)
ဗေဒင်မေးပြီ ယတြာချေဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်ဗျာ... ကြည့်လဲလုပ်ကြ.. မိူးပျံဘူဘောင်း ပေါက်ပြီးပြုတ်ကျလာမယ့် အန်တီစုပုံ ဘယ်ရောက်မယ် မသိ....
သိပ်ပြီးသတ္တိရှိတယ် ဆိုတဲ့သူတွေ ပြည်တွင်းမှာ လိုအပ်လာရင် ဘယ်သူရှေ့ထွက်မလဲ စောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့.... နအဖကို ရင်ဆိုင်ဘို့မပြောနဲ့ အသေခံတိုက်နေတဲ့ တပ်တွေကိုတောင် တစ်ကျပ်တပြားထောက်ပံ့ဘူးလို့လား.. အာကျယ်နေတဲ့ အဖွဲ့.. မသိတဲ့သူကသာယုံမယ်... လာပြောတဲ့သူတွေက သောက်ချဉ် မဟုတ်ဘူး... ဟောင်တဲ့ကောင် မကိုက်ဘူး ကိုက်တဲ့ကောင် မဟောင်ဘူးဟေ့... မင်းတို့ဆီကို မလာတာနဲ့ပဲ ထင်ခြင်ရာထင်နေကြတယ်.. အပေါ်ကတယောက်ပြောသလို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးရင် ဘိန်းဒေါခေါ်ပြီး ဓါတ်သာရိုက်ကျတော့... ဖွိန်...
Anonymous.... လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် တကျပ်တပြားမှ မထောက်ပံ့ပေမယ့် ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေကို လစဉ်မပျက် ထောက်ပံ့လျက်ပါ။ ခင်ဗျားမသိတာဘဲ ရှိတာပါ။
To Anon : June 4, 2009 4:14 AM
ဒါဖြင့်..ခင်ဗျားကတော့ ကိုက်လည်းကိုက်၊ဟောင်လည်းဟောင်ပေါ့နော်..ကောင်းပါလေ့ဗျား :D
သြော..မေ့လိ်ု့၊ဟောင်ရင်လည်း သတ်ပုံလေးတော့ နဲနဲဂရုစိုက်ပြီး ဟောင်ဗျာ..ကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ဗျိုး..:D
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် ....
Stay in Spore, Enjoying S$$$, happily staying family, Supporting Spore GDP ...Ofcourse...
ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေကို လစဉ်မပျက် ထောက်ပံ့လျက်ပါ။...
Cents and penny...
ဆိုလိုတာကတော့ အသေခံတိုက်မယ့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဖယောင်းတိုင်ဖိုးငွေတွေ ထောက်ပံ့ရမယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပတ်ရာကျမှာပေါ့ဗျာ။ ဖယောင်းတိုင်ဖိုးငွေက ဘယ်လိုထိရောက်တဲ့ အလုပ်တွေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေး ရှင်းပြပါလားဗျာ။ အလှူခံတဲ့နေရာ မှားနေပြီထင်တယ်ဗျို့။
ABSDF ရဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေတော့ စင်ကာပူမှာ တစ်ခါရောင်းပေဖူးတယ်။ သူတို့က ပြက္ခဒိန်သာ ကူရောင်းခိုင်းတာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အိပ်စိုက် ဖယောင်တိုင်ဖိုးကိုတော့ ယောင်လို့တောင် မျက်စောင်းထိုးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ နေစမ်းပါအုံး။ ခင်ဗျားက ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ။
Buy candles, balloons, flowers and Pray...
It's these Guy Do...
အော် ခက်နေပါပြီ။ ကဲပါဗျာ အလှူငွေမရလို့ စိတ်မကောက်ပါနဲ့။ စင်ကာပူမှာ ဖယောင်းတိုင်လာရောင်း။ ထွန်းဖို့လိုတိုင်း ခင်ဗျားဆီက ၀ယ်ပေးမယ်။ ပန်းနဲ့ပူဖောင်းပါ တွဲရောင်း။ ဈေးကောင်းပေးမယ်။
နောက်တစ်ခု ကျန်သေးတယ်ဗျ။ ခင်ဗျားတို့ အကြံပေးထားတာက ဗေဒင်မေးပြီး ယတြာချေဖို့ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အမည်မသိဘိုးတော် ဆိုပြီး ဗေဒင်ဟောချင်လည်းပြော။ မယုံပေမယ့် အားပေးပါ့မယ်။ မှန်တာ မမှန်တာ အပထား။ အခုလို ရယ်စရာတွေ များများပြောရင် အပျင်းပြေဟောသူတွေနဲ့ ခင်းဗျား အလုပ်ဖြစ်မှာပါဗျာ။ ကဲ ဒီလောက် စဉ်းစားထားပေးတာ အလှူငွေမရလို့ ဘူမနေနဲ့တော့။
To Anon : June 4, 2009 10:46 AM
Ha..Ha..Do you think they will tell you the real amount of money they sent when you provoke them with the words " Ofcourse ofcourse...Cents and penny..."?
They are not stupid but you are the MORON.
By the way, are you also working for SPDC?
I'm justanormal...
i luv my country and I luv ASSK..
But i hate big talks and no action..
Anonymous (June 4, 2009 12:01 PM)
So, what action did you do other than writing lousy comments here?
To Anonymous (@June 4, 2009 10:46 AM)
"Stay in Spore, Enjoying S$$$"
Of course, whoever stay out of Burma have to enjoy/use $$$$ because nobody can use " Kyats ". Clear ????
"happily staying family"
It'sagood thing. Isn't it? What's wrong with that? "Try to appreciate others' good thing and be productive in your life..if possible."
"Supporting Spore GDP"
I think for the time being, it is better to support S'pore's GDP rather than Burma's because those military evils and their suckers are sitting on it. CLEAR????
Start talking big words..?
1964 to 2009, alot of generations of great people are sacrifice their life, lost their life, stay in prisons, etc...
so enjoying SS$$$ and talk bigger for small praying session..?
so start talk big talks..?
disgusting day after day....
don't forget the rest are bigger group.
Getting pissed of seeing those nonesense comments by Anonymous!
Whatever you say Big or Small, what does matter is " Truth".
Btw, correction: intead of 64, is it not 62 to 2009? So many courageous people sacrificed, have sacrificed, are still scarifying and will keep on sacrifying. We salute them. We support them in any form. We WILL take any form peaceful way to show our integrity with them. What's wrong with that? Isn't at least better than doing nothing?
ကျုပ်က သွာ့စ်မှာ အက်စပတ်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ ကောင်ပါဗျာ.. ဘယ် အဖွဲ့အစည်းကလဲမေးရင်တော့.... လူပျိုကြီးများ အဖွဲ့ကပါ.. ဟတ်ဟတ်.. တခြားအနောနီးမတ်တွေက ကျုပ်မဟုတ်ဘူးဗျို့.. အိုင်ပီစစ်လိုက်ပါလားဗျာ... မဲမဲမြင်တိုင်း ဘသူထင်နေမယ့် အစား....
To Another Anonymous (June 4, 2009 2:21 PM),
Ha Ha, another anonymous with the same bad English???
You are very stupid, Moron.
Anonymous (June 3, 2009 8:47 PM) ....
ဘလော့ဖတ်အတွေ့ အကြုံအရ အထက်ပါ အနောနီးမတ်ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ဆဲတတ်တဲ့သူကြီးက တခြားသူမဟုတ် ဘလော့ဂါကြီးကိုပေါ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ ခင်ဗျာ....
"so start talk big talks..?"
ဟေ့လူ..ခင်ဗျားကော်မန့်ဖတ်ရတာ..ဟို.. Tomorrow..Tomorrow..Two tomorrow, I will go back ဆိုတဲ့ သိန်းစိန် ကိုတောင်ပြေးသတိရမိတယ်..တကယ်..:D :D :D
အနောနီးမတ်စ် သွာ့စ် ကိုင်တဲ့ အက်စပတ်ဆိုတာ စလုံးရဲတွေ ခိုင်းစားဖို့ထုတ်ပေးတဲ့ Special Pass ပဲဖြစ်ရမယ်။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် သူအပြစ်မြင်နေတာ။ ကြည့်ရတာ စင်ကာပူမှာ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တိုင်း သူ့စလုံးအန်းကုန်းတွေ သူ့ကိုထောင်းပုံရတယ်။ ၀မ်းနည်းပါတယ် Spy သွာ့စ်ရယ်။
" intead of 64, is it not 62 to 2009?
............................. Isn't at least better than doing nothing? ""
since so many years passed by..
What your best idea is Only cute candles in your free time and just better than nothing doing idea and talk louder...?
Better prepare for another century...with these ideas..sadly..
ခင်ဗျားစိတ်မရှည်ရင် ကိုယ်တိုင်ထွက်လုပ်ပေါ့ဗျာ။ ဘာလဲ ခင်းဗျားရုပ်လူမြင်မှာစိုးလို့ ကြောက်နေတာလား။
Firstly, it would beagood manner to use at leastahandle name to represent yourself here so that people can see who is who.
To the Anon who reponded me:
I am here not to argue with you but just showed down my frustration with your annoying comments. So I won't argue with you again. But let the people here know what activities do you think are good other than peaceful demonstration, prayer vigils and likewise, which every person can participate. Ofocz just share your opinion only if you are an anti-junta andastaunch supporter of Burmese democracy struggle.
postတော်တော်များများကိုဖတ်လိုက်တာ မျိုးမြင့်မောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကမဲမဲမြင်တိုင်းလျှောက်ကိုက် နေပါလား ငပေါကဆေးမတိုက်ထားဘူးထင်တယ်
Go under over Our Risqu‚ Prices at www.Pharmashack.com, The Unequalled [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Apothecary's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Foretell Prime Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also ClassifyaPre-eminent Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Meals ! We Grant away Prominence mush [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !
Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat marketing[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses alternative or little-understood avenues to generate an income online.